प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगे डा. केसी::Hamrodamak.com
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगे डा. केसी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नका लागि प्रा.डा. गोविन्द केसी महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा पुगेका छन्। केसी बुधबार राती ९ बजे ओलीलाई भेट्न अस्पताल पुगेका हुन् ।
सोमबार बिहान छातीमा संक्रमण भएपछि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न डा. केसी पुगेका हुन्।
सो क्रममा केसी र ओलीबीच करीब १० मिनेट कुराकानी भएको बताइएको छ । डा केसी पक्षीय डाक्टर अभिषेकराज सिंहले ओली र केसीबीच करीब १० मिनेट कुराकानी भएको बताउँदै सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ ठीक भएसँगै चिकित्सा अिशक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
‘म अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेबित्तिकै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्छ’ ओलीको भनाई उदृत गर्दै सिंहले भने ।
केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनेसम्बन्धी आफ्नो माग पूरा नभए फेरि अनसन बस्ने बताउँदै आएको अवस्थामा ओलीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सो क्रममा डा केसीले ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेका थिए ।
चिकित्सकहरुले ओली कम्तीमा पनि शनिबारसम्म अस्पतालमै रहनु पर्ने बताएका छन् । यद्यपी उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मोख छ।